FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SAINT BERNARD - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Saint Bernard
Stella ilay masindahy Saint Bernard tamin'ny taona 2
Alika goavambe, mahery ary hozatra i Saint Bernard. Raha mbola mijanona mifanaraka amin'ny halavany ny lanjany, ny alika avo kokoa no maha-lafo azy. Mahery ny loha be. Fohy ny vavam-borona, lehibe kokoa noho ny halavany. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Mivelatra ny orona, misy vavorona misokatra malalaka, ary toy ny molotra mainty ny lokony. Ny maso salantsalany dia apetraka amin'ny sisiny ary miloko mainty. Ny sofina salantsalany dia napetraka avo, milatsaka ary mijoro somary lavitra ny loha. Hozatra ny tongotra. Ny tongotra dia lehibe miaraka amin'ny rantsan-tongotra mafy sy lava. Ny rambony lava dia malalaka sy matanjaka eo amin'ny fotony voatazona ambany rehefa milamina ny alika. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Misy karazany roa ny palitao: marokoroko sy malama, fa ny roa kosa matevina be ary tonga fotsy miaraka amin'ny marika amin'ny tan, mena, mahogany, brindle ary mainty, samy hafa mitambatra. Mainty matetika ny tarehy sy ny sofina. Ao amin'ireo alika mifono marokoroko dia lava kokoa ny volo ary misy volom-borona amin'ny feny sy tongotra.
Saint Bernards dia malefaka be, sariaka ary mandefitra amin'ny ankizy. Mihetsika miadana izy ireo, manam-paharetana, mankatò, tsy mivadika, mazoto ary te hampifaly. Aza hadino izany hifanerasera ity karazany ity dia tena tsara amin'ny mbola kely miaraka amin'ny olona sy ny biby hafa. Manan-tsaina sy mora ampiofanina izy io, saingy tokony hanomboka aloha ny fiofanana, raha mbola voafehy ihany ny alika. Ampianaro ity alika ity tsy mitsambikina amin'ny olombelona manomboka amin'ny alika kely. Tadidio fa ny alika tsy voafehy mitovy habe aminy dia manome olana na dia olon-dehibe matanjaka aza raha te hampiharina amin'ny toerana be olona. amin'ny tadiny , ka makà fanaraha-maso hatrany am-piandohana, mampianatra ny alika hatramin'ny voditongotra. Ny Saint Bernard dia mpitily tsara. Na ny habeny aza dia misakana tsara. Milomano izy ireo rehefa avy misotro na misakafo. Alao antoka fa mijanona ho an'ny alika ianao mpitarika fonosana . Ny alika dia tsy mila zavatra hafa ankoatry ny fahalalana inona no antenaina amin'izy ireo ary ny St Bernard dia tsy maningana. Ny famelana ny alika mitovy habe amin'ity habe sy habeny ity ho tsy voafehy dia mety hampidi-doza ary mampiseho fahaiza-mitana tsy fahaizana mitantana. Saint Bernards dia manana fofona maimbo ary koa manana fahatsapana fahenina momba ny loza mananontanona avy amin'ny tafio-drivotra sy ny avalanca.
Hahavony: 25.5 - 27.5 santimetatra (61 - 70 cm)
Milanja: 110 - 200 pounds (50 - 91 kg)
Mora tratran'ny aretina 'wobbler', olan'ny fo, olan'ny hoditra, fivontosan'ny valahana, fivontosana sy fivoahana avy any ivelany — lavitry ny sisin'ny hodi-maso, mazàna eo amin'ny sarony ambany. Ny vavony miolakolaka dia tokony hojerena. Toy ireo alika ireo mora mitsonika , tsara kokoa ny manome sakafo kely na roa na telo isan'andro azy ireo fa tsy sakafo lehibe iray.
bullmastiff rottweiler mix amidy
Ny Saint Bernard dia hanao tsara amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Ireo alika ireo dia somary tsy miasa intsony ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely. Afaka miaina ivelan'ny trano izy ireo, fa aleony miaraka amin'ny fianakaviany. Manana fandeferana ambany izy ireo amin'ny toetr'andro mafana, efitrano mafana sy fiara. Afaka wheeze sy snore.
Lava MANDEHANA ilaina isan'andro mba hitazomana ny Masindahy Bernard amin'ny toe-batana ara-tsaina sy ara-batana tsara. Ny alika kely dia tsy tokony hanao fanatanjahan-tena be loatra indray mandeha raha tsy miforona tsara sy matanjaka ny taolany. Ny fitsangantsanganana fohy sy ny fotoana fohy fanaovana lalao dia tsara indrindra mandra-pahatongan'ny alika tokony ho roa taona.
8-10 taona eo ho eo
Ankizy 6-10 eo ho eo
Ireo karazana palitao roa ireo dia mora karakaraina. Borosio ary borosy amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Ny shampoo dia mety manala ny palitaon'ny fananana misy menaka tsy mahazaka rano, ka mampiasa savony malefaka. Ny maso, izay mety hirona amin'ny rano, dia mila fiheverana manokana mba hitazomana azy ireo ho madio sy tsy ho sosotra. Ity karazany ity dia mandoaka in-droa isan-taona.
Ny Saint Bernard dia natsangan'i St. Bernard de Menthon tamin'ny taona 980 AD ary niterahan'ny moanina, azo inoana fa tamin'ny fiampitana ny taloha Tibet mastiff miaraka amin'ny Great Dane , Alika Mountain Mountain lehibe kokoa ary ny Pyrenees mahafinaritra . ny Alpine Mastiff , an lany tamingana Molosser ny alika dia ny razamben'ny Saint Bernard maoderina. Ny Saint Bernards voalohany dia avy amin'ny karazany fohy karazana, satria ny palitaon'ilay karazan'akanjo lava volo dia nanangona icicle. Nampiasain'ny Hospice izy ireo, fialofana ho an'ny mpandeha amin'ny alàlan'ny làlan'i Alpine mampidi-doza eo anelanelan'ny Soisa sy Italia. Tamin'ny tapaky ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia nanjary nalaza i Saint Bernard ho alika mpamonjy voina izay miaro ny olona amin'ny riandrano amoron-dranomandry any akaikin'ny Hospice. Afaka mamofona olona ambanin'ny lanezy maro ny alika. Namonjy olona an'arivony maro nitady sy nahita mpandeha very na naratra izy ireo. Miasa amina fonosana ny alika hitady ireo traboina. Rehefa hita izy ireo dia hilelaka sy hiara-mandry aminy mba hampanafana azy ireo. Raha alika na mihoatra handry amin'ny vatana (al) dia hisy alika hafa hiverina any amin'ny Hospice hampandre azy ireo fa nahita ny olona izy ireo. Ekena ny ekipa mpamonjy iray manontolo. Ny Saint Bernard koa dia fantatra fa afaka maminavina ny tafio-drivotra sy ny avalanca. Mety hitranga izany noho ny fahaizan'ny alika mandre feo ambany dia ambany izay tsy zakan'ny olombelona. Ny Saint Bernard dia neken'ny AKC tamin'ny taona 1885. Ny talenta sasany an'ny Saint Bernard dia ny fikarohana sy famonjena, alika mpiambina, mpiambina ary sarety.
George the Saint Bernard puppy amin'ny faha-7 volana— 'George no mora aleha indrindra !! Tena mila omenao azy hampisondrotra sy handeha izy! Tena sariaka amin'ny olon-tsy fantatra izy ary biby hafa ary TIA ny ankizy !!! '
George the Saint Bernard alika amin'ny 7 volana
Jimmy ilay masindahy masina Bernard, 1 taona avy any India
Hercules amin'ny 5 volana sy ilay alika kely Dr. Seuss AKA Doc ho alik'alika 7 herinandro
Leo the Saint Bernard amin'ny 2 taona miaraka amin'ny tompony falifaly any India
Leo the Saint Bernard amin'ny maha alika kely azy
Alika Saint Bernard
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Saint Bernard
alika omby alemanina mpiandry ondry mifangaro alika kely
pointer fohy fohy alemana
alika tendrombohitra bernese mifangaro amin'ny mpiandry ondry alemanina
alika folo ambony 2015
alika toa voalavo